Tallaalka Covid-19: Maxay tahay dawada AstraZeneca ee Soomaaliya la geeyay? - Caasimada Online
Home Warar Tallaalka Covid-19: Maxay tahay dawada AstraZeneca ee Soomaaliya la geeyay?
Tallaalka Covid-19: Maxay tahay dawada AstraZeneca ee Soomaaliya la geeyay?
Tallaalka cudurka Covid-19 ee ay soo wada saareen shirkadda AstraZeneca iyo Jaamacadda Oxford ayaa saaka magaalada Muqdisho laga dajiyay.
Wasiiro ay horkaceyso wasiirka caafimaadka, Fowsiyo Abiikar Nuur, ayaa garoonka ku guddoomay shixnadda tallaalka.
Tallaalka wuxuu gaaraya ilaa 300,000 oo ah nooca Oxford-AstraZeneca si loo gaarsiiyo boqolkiiba 20 dadka ku nool Soomaaliya.
Muxuu yahay talaalkan?
Shirkadda AstraZeneca ee soo saarta dawooyiinka ee fadhigeedu yahay UK oo kaashanaysay jaamacadda Oxford ayaa soo saartay talaalkan looga hortagayo fayraska koroona, dhamaadkii sanadkii hore.
Talaalka sidiisaba, wuxuu unugyada difaaca jirka u diyaariyaa sidii ay 80% uga hortagi lahaayeen in ku dhaco qofka Covid-19.
Natiijooyinka ka soo baxay hay’adda Caafimaadka Dadweynaha England (NHS), waxay ku saleysan yihiin dadka da’doodu ka weyn tahay 80 sano, oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee laga billaabay tallaalkan.
In ka badan 10,000 qof oo mutadawiciin ah oo ku sugan dalka UK iyo dalal kale ayaa ka qeyb galay tijaabada talaalkan.
Waa tallaal laga sameeyay nooc daciif ah oo laga helo fayraska caadiga ah ee hargabka ku dhaco qaar ka mid ah xayawaanada oo loo yaqaano adenovirus. Waxaana loo habeeyey qaab u eg cudurka korona balse ma sababi karo wax xanuun ah.
Marka la isku duro, wuxuu difaacayaa jirka oo baranaya sida loola dagaallamo fayraska dhabta ah, haddii loo baahdo.
Si ka duwan tallaalka Pfizer, oo ay tahay in lagu hayo meel ka qabow (-70C), tallaankan Oxford waxaa lagu keydin karaa qaboojiye caadi ah. Tani waxay fududeyneysaa in la geeyo talaalkan meelo badan.
Tijaabo lagu sameeynayay talaalkan ayaa mar sababay in laga hakiyo guud ahaan caalamka ka dib markii dadka sida mutadawacnimada ah loogu tijaabiyay ee dalka UK uu jirkooda uga falceliyay si ka duwan sidii la rabay.
Waxay ahayd markii labaad oo hakad lagaliyay talaalka ay iska kaashanayaan jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca.
Afhayeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay in dadkii ka qeyb galay tijaabada talaalka la dhigay isbataal laguna sameeyay baaritaan madaxbanaan.
Walaaca laga qabo nooc ka mid ah tallaalka covid-19?
Netherland ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee hakiya isticmaalka tallaalka korona ee AstraZeneca sababo la xiriira walaac ka imanaya dhibaatooyinka uu keenay.
Dowlada Dutch ayaa sheegtay in talaabadan oo socon doonta ugu yaraan illaa 29-ka bisha Maarso ay tahay mid taxadar ah.
Jamhuuriyadda Ireland ayaa mar sii horreysay go’aan la mid ah ka qaadatay ka dib markii warbixinno lagu sheegay in xinjirowga dhiigga ee dalal badan laga soo weriyay.
“Dalalka waa in aysan joojin isticmaalka tallaalka Covid-19 ee AstraZeneca sababo la xiriira in uu keeno xinjiro fadhiista dhiigga, iyadoo aysan jirin wax muujinaya in ay taasi run tahay,” ayuu yiri Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Balse afhayeen u hadashay WHO ayaa maanta sheegtay in uusan jirin wax xiriir ah oo ka dhaxeeya tallaalka iyo xinjiraha dhiigga galay.
Margaret Harris, ayaa sheegtay in “tallaalkan uu yahay mid aad u fiican” oo ay tahay in la sii wado isticmaalkiisa.
Ilaa 5 milyan oo Yurub u dhashay ayaa illaa iyo hadda qaatay tallaalka AstraZeneca.
Waxaa jiro illaa 30 kiis oo gudaha Yurub laga soo sheegay, kuwaas oo ka mid ah dadkii tallaalka qaatay oo uu ku dhacay xinjirowga dhiigga. Waxaa sidoo kale jiro warar sheegaya in nin 50 sano jir ah uu ku dhintay Taliyaaniga ka dib markii uu xanuunsaday.
Go’aanka Bulgaria ee lagu joojinayo qeybinta tallaalka ayaa yimid ka dib markii tallaabo taas la mid ah ay qaadeen dalalka Denmark, Iceland iyo Norway iyo sidoo kale Thailand. Taliyaaniga iyo Austria ayaa sidoo kale joojiyay qeybo ka mid ah xirmooyinka tallaalka.
Hay’adda Dawooyinka ee Yurub, iyo waaxda xakameysa dawooyinka ee Midowga Yurub ayaa goor sii horreysay sheegay in aysna jirin wax muujinaya in tallaalku uu sababo xinjiro dhiigga dhex fadhiista.
AstraZeneca ayaa sheegtay in badqabka tallaalka si wayn loogu baaray sheybaarrada.
Dalalka kale, sida UK, Jarmalka, Australia iyo Mexico, ayaa sheegay in ay sii wadayaan isticmaalka tallaalka.